नेपालको नागरिक भएर नागरिकता नहुँदाको पीडा | Ajako Aartha | Nepal's No. 1 Business News Portal
माघ २३, २०७६ | सोनी खातुन
कुनै पनि देशको नागरिक भएर बाँच्न नागरिकता नभइ नहुने चिज हो । जोसँग नागरिकता हुँदैन, उसको पीडा अथाह हुन्छ ।
यो पीडा आफुले नभोगेसम्म बुझ्न सकिन्न । म पनि यो पीडाबाट गुज्रिरहेकी छु । म नेपाली भए पनि नागरिकता बिना नै जीवन बिताउँन मुस्किल मात्र नभएर जीवन नै असहज भएको छ ।
म २० वर्षकी भएँ । उमेरसँगै मेरो आफ्नो र परिवारप्रति दायित्व बढेको छ । मैले पनि केही काम गरी पढाई खर्च र सकेसम्म आफ्नो परिवारलाई सक्दो सहयोग गर्ने सोच बनाएकी हुन । तर मेरो नागरिकता बन्न नसकेकोले धेरै कामबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।
नागरिकता बिना जीवन जिउँदा त पहिलो मेरो काम गर्ने जीवनमा पनि असर पर्दो रहेछ भन्ने बुझेकी हुँ ।
नेपालमा बसेर आफ्नो भविष्य बनाउन नसकिने कुरा एउटा तीतो सत्य हो । मेरो सोच पनि विदेशमा काम गरी नेपालमा आफ्नो भविष्य सपार्ने ठूलो सपना थियो ।
तर आफ्नै देशमा नागरिकता बिना जीवन बिताउन संघर्ष गर्ने व्यक्तिले त्यो ठूलो सपना देख्नु दुरूह जस्तै भएको छ । आफूसँग नागरिकता नभएकोले लगभग शैक्षिक शिक्षा प्राप्त गरेर केही गर्न सक्छु भन्ने आशा पनि टुटेको छ ।
अब नागरिकता बिना आफ्नो जीवन धेरै अन्धकार बित्ने रहेछ भन्ने अनुभव गर्दै अगाडि बढ्दै छु ।
बाल्यकालमा हँदा मलाई जीवन धेरै सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो । बाल्यकालमा जीवन सजिलो लाग्नु स्वभाविक हो ।
तर आफ्नो शिक्षाको स्तर बढ्दै जाँदा जीवन सजिलो हुन्छ यो भन्ने कुरा मात्र हो भन्ने थाहा पाएँ र आफ्नो शैक्षिक अध्ययन गर्दै गर्दा स्कूल र कलेजमा नागरिकताको आवश्यक्ता पर्दा बल्ल नागरिकता के हो भन्ने थाह पाएँ ।
स्कूलमा जसोतसो पढ्न पाए पनि कलेजमा नागकिरता अनिवार्य हुँदो रहेछ । कलेज पढ्ने क्रममा मैले नागरिकताको आवश्यक्ता महसुस गरें । आफू नेपालको नागरिक हुँदा हुँदै पनि नागरिकताको दुःख पाइने रहेछ भन्ने कुरा पनि मैले बुझेँ ।
पहिला पहिला मलाई राम्रो पढाई हुँदा राम्रो जागिर पाइन्छ जस्तो लाग्थ्यो तर अहिले आएर यो थाहा भयो कि राम्रो जागिर पाउनलाई राम्रो शिक्षा भन्दा नागरिकता चाहिँदो रहेछ । नागरिकता नभपछि राम्रो जागिर होइन जागिर नै नपाइने रहेछ ।नागरिकता नभएर जागिर खान जाँदा राम्रो बायो–डाटा हरेर भोली आउनु भन्नेहरूले नागरिकता लिएर आउनु भन्दा मन खिन्न हुन्छ ।
जागिर खाने क्रममा धेरै ठाउँमा रिजेक्सन भन्ने कुरा देख्नु प¥यो । सधैँ आफ्नो आत्मबल डगमगाउँदै गएको महसुस गरें ।
नागरिकता नभएर जागिर खाँदा मात्र दुःख नभएर अरू ठाउँहरूमा पनि दुःख भोग्नु पर्ने हुँदो रहेछ । नागरिकता नै आफ्नो पहिचान हुँदो रहेछ ।
चाहे आफूले जति नै राम्रो काम गरे पनि । मान्छेको विश्वास जित्न पनि धरै नै गाह्रो हुँदो रहेछ । आफू इमान्दार भएतापनि एउटा नागरिकता नहुँदा सँधै निराश हुनु पर्दो रहेछ । जागिर आफ्नो ठाउँमा छ तर नागरिकता बिना आफ्नो केही अस्तित्व नहुने रहेछ ।
नागरिकता नभएर आफ्नो जीवन पूरा अन्धकारमा रहने र आफ्नो नाममा केही गर्न असम्भव हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएँ । आफूले सबै काम गर्न सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि केही गर्न नपाउँदा आफू पुरै तरिकाले केही गर्न नसक्ने अनुभव गरें ।
धेरै दुःख गरेर पढि सकें पनि आफ्नो पढाई केही काम नलाग्ने हुँदा के गर्नु के नगर्नु जस्तो अनुभव गर्दै गएँ । आफ्नो लागि केही गर्न नसक्ने अवस्थामा आमाबुवालाई छोरी भएर पाल्ने सपना चक्नाचुर भएको अनुभव गरेकी छु ।
आफूसँग नागरिकता नहुनु भनेको आफ्नो जीवन पुरा अन्धकारमा बित्नु हो । आफू गरिब भएकोले होला जागिर नहुँदा नागरिकता बिना जीवन अन्धकार लागेको हो ।
आफूले आफ्नो लागि आफैँ सबै गर्न सक्ने उमेरमा पनि आमाबुवामा निर्भर हुनु पर्दा साह्रै निराश लाग्छ । आमाबुवाले सक्ने पढाई लेखाई दिए तापनि आफ्नो लागि केही गर्न नसक्दाको दुःख व्यक्त गर्न सक्नु असम्भव लाग्छ ।
आफूले गर्न सक्ने काम धेरै हुन्छ तर जुनसुकै काम गर्नुलाई नागरिकताको आवश्यक्ता हुँदा आफ्नो पढाई कुनै पनि ठाउँमा उपयोग नहुने भयो ।
आफ्नो केही काम नहुँदा आफ्नो अस्तित्व नै नहुने अनुभव गरेकी छु । आफ्नो अस्तित्व नै नहुँदा दैनिक जीवन बाँच्न धेरै गाह्रो हुँदोरहेछ । अस्तित्वविहीन जीवन कोही पनि बाच्न चाहँदैन र म त्यही समस्यासँग जुझ्दै आएकी छु ।
संघर्षसँग डराउन डराएकी होइन तर संघर्ष गर्दा गर्दै आफ्नो जीवनको कुनै अस्तित्व छैन भन्ने सोचमा लागेको छु । सबै लिगल काम गर्न नागरिकताको आवश्यकता पर्छ जुन मसँग असम्भव छ । त्यसकारण जुन काम गर्दा नागरिकताको अभाव हुँदैन ।
त्यही काम गर्न बाध्य हुनेछु । इलिगल काम गर्न कसलाई रहर हुन्छ र तर आफ्नो अवस्था देखेर त्यो काम गर्न बाध्य हन्छु होला आउने दिनहरूमा ।
सुरूवातमा त नागरिकता के हो ? यो किन चाहिन्छ भन्ने कुरामा अल्मलेको थिएँ । जब जागिरको खोजीमा लागे, नागरिकताको मूल्य पनि बुझेँ । तैपनी मनमा आशा थियो कि सबै कार्यालयमा नागरिकता मागिदैन होला तर जति जागिरको खोजी गरें त्यति नै मेरो सोच गलत रहेको अनुभव गर्दै गएँ । जुनसुकै कार्यालयमा पनि नागरिकता आवश्यक हुने र नागरिकता बिना आफूले जागिर खाने सोच असम्भव रहेको अनुभव गरें ।
हामी सबैलाई अनुभव भएको कुरा नै हो कि नागरिकता बिना कुनै सपना पूरा गर्न असम्भव हुन्छ । त्यसअर्थ नेपालको नागरिक भएर नागरिकता नहुँदा धेरै पीडाहरू सहनुपर्ने र आफ्नो अस्तित्व नहुने कुरामा असाध्यै दुःखी अनुभव गर्छु ।